Sababata Ay Somaliya Dalkeeda Uga Celisay Diyaarad Sidday Jaad Laga Keenay Kenya Oo Faahfaahin Laga Bixiyey - Jigjiga Online
HomeWararka MaantaSababata Ay Somaliya Dalkeeda Uga Celisay Diyaarad Sidday Jaad Laga Keenay Kenya Oo Faahfaahin Laga Bixiyey
Muqdisho (JO) – Somaaliyaa ayaa xaqiijisay iney dib usoo celisay diyaarad sidday jaad oo laga leeyahay Kenya oo lagu eedeeyay iney jabisay tallabbyinka lagu xaddidayo fayraska corona, sida uu sheegay sarkaal magaciisa ka gaabsady oo dawladda ka tirsan.
Sarkaalka ayaa intaas ku daray in diyaaraddaas ay Jimcihii celiyeen, markiii danbena ay ka degtay dalka Jabbuuti, ka hor inta aysan ku noqon Kenya.
Dhanka kale sida uu ku warramayo warageyka Daily Nation ganacsatada jaadka ee dalka Kenya ayaa waxaa soo food saartray caqabad kale kaddib markii dib loo soo celiyay diyaaradasi sidday 11 tan oo jaad ah oo ku wajahnayd maamulka Puntland ee Soomaaliya.
Waa markii labaad ee ay Soomaaliya soo celiso diyaarad ay Kenya leedahay oo sidday jaad muddo bil gudeheed ah.
Nyambene oo ah guddoomiyaha urur ay ku mideysan yihiin ganacsatada jaadka ee Kenya oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ee Kenya ayaa sheegay in diyaaradaas sidday jaadka hawada laga soo celiyay.
Soomaaliya ayaa h bishii Maarso hakisay diyaarad ay Kenya leedahay oo sidday jaad si loo xoojiyo tallaabooyinka looga hortaggayo fiditaanka feyraska Corona.
“Diyaaradda waxay sidday 11.3 tan oo jaad ah, waxay ku wajahneyd Puntland, waxay sii martay hawada Jabuuti abaare 10-kii subaxnimo kaddib markii ay martay hawada Itoobiya, wuxuu qorshuhu ahaa inay ku degto Puntland, waxaana lagu amray in dib ay ugu laabato Kenya, waana khaasaarihii ugu xoggaan abid muddo bil gudahood” ayuu Munjuri u sheegay wargeyska Daily Nation.
Wuxuuna intaa raaciyay in lacag dhan 80 kun oo doollar ay khasaareen.
Wuxuu sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay sare u qaadday canshuurta ay ka qaado jaadka taasina ay horseeday inay adkeyn karto in uu gaaro dadkii loogu talagalay.
Somaaliya waxaa ku yaalla suuq aad u weyn oo Khaatka lagu iibiyo. Waxa uu jaadka ka baxa dalka Kenya gaar ahaan dhulka sare. Marka la soo guro khaatka, waxaa loo baahan yahay durbadiiba in si dhaksiya loogu qeybiyo dadka macaamisha ee ku sugan dalka dibaddiisa.
Isla marka uu jaadka gaaro magaalada Muqdisho, ragga ayaa koox koox u fadhista oo bilaaba qayilaadda. Somaaliya ayaa duulimaadyada caalamiga xirtay dhammaadkii bishii Maarso si loo xaddido faafidda fayraska corona taasi oo ka dhigan in jaadka aanu Soomaaliya la geyn karin.